५० स्थानमा भएको उपनिर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक, कहाँबाट को विजय भयो ? -
५० स्थानमा भएको उपनिर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक, कहाँबाट को विजय भयो ?
December 2, 2019 December 2, 2019 अखवार अनलाइनLeaveaComment on ५० स्थानमा भएको उपनिर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक, कहाँबाट को विजय भयो ?
काठमाडौं १६ मंसिर । देशभरका ५२ स्थानमा भएको उपनिर्वाचनमा धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर र धरानकै वडा नम्बर ७ को वडाध्यक्ष बाहेक अन्य ५० स्थानको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छ ।
सार्वजनिक भएको मत परिणाम अनुसार कहाँबाट को विजय भयो ?
एकमात्र प्रतिनिधिसभा कास्की क्षेत्रनम्बर २ सहित २९ स्थानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार बिजयी भएका छन् । प्रदेशसभाका ३ सिटमध्ये भक्तपुर क्षेत्रनम्बर १ (क) कांग्रेस विजयी हुँदा दाङ क्षेत्रनम्बर ३ (ख) मा नेकपा र बागलुङ क्षेत्रनम्बर २ (ख) मा नेकपा समर्थित राजमोले जितेका छन् । नेकपाले प्रतिनिधिसभासहित दाङको प्रदेशसभा र उपनिर्वाचन भएका सबै गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जितेको छ । उपनिर्वाचन भएका देशभरका ४३ वडामध्ये धरान गन्न बाँकी रहँदा २३ वडाध्यक्ष नेकपाले जितेको छ ।
बागलुङको प्रदेशसभा सदस्यमा नेकपा समर्थित राष्ट्रिय जनमोर्चाले जितेको छ भने प्युठानको ऐरावत गाउँपालिका ३ को वडाध्यक्षमा स्थानीय नेकपा नेताहरुको समर्थनमा उम्मेदवार बनेका बागी उम्मेदवारले जितेका छन् ।
मतगणना सम्पन्न भएका ५० स्थानमध्ये नेकपा र नेकपा समर्थित उम्मेदवार सहित ३१ स्थानमा वामपन्थीले जितेका छन् । यसअघि कांग्रेसले जितेको फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्ष, हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष र यसअघि राजपाले जितेको महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका अध्यक्ष उपचुनावबाट नेकपाले जितेको छ । उपचुनावमा कांग्रेसले दुई गाउँपालिका गुमाए पनि भक्तपुरको प्रदेशसभा सदस्य थप गर्न सफल भएको छ । उपचुनावको मतगणना सकिएका ५० मध्ये कांग्रेसले एक प्रदेशसभा सदस्यसहित ११ वडाअध्यक्ष जितेर १२ स्थान आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ ।
त्यस्तै समाजवादी पार्टीले चार वडाध्यक्ष जितेको छ भने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले ३ वडाध्यक्ष जितेको छ । समाजवादीले एउटा वडा थप गरेको छ भने राजपाले एउटा गाउँपालिका अध्यक्ष गुमाएको छ । मतगणनाको पछिल्लो परिणाम अनुसार दाङको क्षेत्र नम्बर ३ ‘ख’प्रदेशसभामा नेकपाकी विमला कुमारी खत्री ५ हजारभन्दा बढीको फराकिलो मतान्तरसहित प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएकी छन् । यसअघि सो क्षेत्रमा नेकपाकै उत्तरकुमार ओली निर्वाचित भएका थिए ।
त्यस्तै बागलुङको क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’ मा वाम गठबन्धनका खिमविक्रम शाही करिब २ हजार मतान्तरसहित प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । देशका तीनवटा प्रदेशसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा भक्तपुर १ ‘क’मा यसअघि नै कांग्रेसका कृष्ण भँडेल निर्वाचित भएका थिए । उपचुनाव भएको एकमात्र प्रतिनिधिसभा कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपाकी विद्या भट्टराई ८ हजार ४ सय मतको फराकिलो अन्तरसहित विजयी भएकी छन् ।
उपचुनाव भएका तीन गाउँपालिका अध्यक्षमध्ये पाँचथरको फाल्गुन्द गाउँपालिकामा नेकपाका वीरवहादुर कुरुम्बाङ विजयी भएका छन् । यसअघि त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका अमर नेम्वाङ विजयी भएका थिए । त्यस्तै संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपाकै तेजबहादुर पोखरेल विजयी भएका छन् । यसअघि पनि सो गाउँपालिकामा नेकपाले नै जितेको थियो । नेकपाले यसअघि राजपाले जितेको महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका अध्यक्षमा पनि विक्रम चौधरीलाई निर्वाचित गराउन सफल भएको छ ।
हुम्लाका खार्पुनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्षमा नेकपाकी रूपा शाही निर्वाचित भएकी छन् । यसअघि सो गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो । कांग्रेसले दुई गाउँपालिका र राजपाले एक गाउँपालिका गुमाउँदा नेकपाले तीन गाउँपालिका थप गरेको छ । वडाध्यक्षतर्फ भने नेकपा र कांग्रेसले आ-आफ्नो संख्या कायम राख्न सफल भएका छन् । तर नेकपाले यसअघि कांग्रेसले जितेका ७ वडामा आफ्नो जित निकालेको छ भने नेकपाले यसअघि जितेका ५ वडामा कांग्रेसले जितेको छ ।
पाँचथरको फाल्गुनन्द गाँउपालिकाको अध्यक्षमा नेकपाका वीरबहादुर कुरुम्बाङ विजयी
श्रीमतीलाई अस्पताल भर्ना गरी रगत खोज्न हिडेका श्रीमान मृत्यु हुदा पनि फर्केनन
उच्च अदालतको आदेशले ओखलढुंगा चम्पादेवीका २६ कर्मचारीको जागिर गयो
May 16, 2019 अखवार अनलाइन
अस्पतालका आठजना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीमा आरडिटी पोजिटिभ देखिएपछि धादिङ अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द
May 22, 2020 अखवार अनलाइन
३५ वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएसंगै ठाटिकाध गाउँपालिका सिल
May 19, 2020 अखवार अनलाइन
धरानमा बस दुर्घटना : पाच जनाको मृत्यु, २० भन्दाबढी घाइते
April 8, 2019 April 8, 2019 अखवार अनलाइन
साफ यू १५ च्याम्पियनसिप : भुटानविरुद्धको खेलमा नेपाललाई चुनौती
August 28, 2019 August 28, 2019 अखवार अनलाइन
काठमाडौ मल अगाडि बाबु–छोरी सवार मोटरसाइकललाई ट्याङ्करको ठक्कर दिदा छोरीको मृत्यु
May 17, 2019 May 18, 2019 अखवार अनलाइन
ओली प्रचण्डबीच बालुबाटारमा बसेको बैठक सकियो
ओखलढुंगामा ११ बर्षिया बहिनीमाथी बलात्कार गरेको अरोपमा दाजु पक्राउ
आज २०७७ असार २६ गते शुक्रबारको राशिफल
नेपालमा भारतीय टिभी च्यानलहरुको प्रशारण रोकियो
नक्सा जारी: भारतीय गुप्तचरका प्रमुख नेपाल केन्द्रीत, प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा थप कडाई
डीएसपीसहित आठ प्रहरीको हत्या गर्ने दुबे पक्राउ
सिन्धुपाल्चोकमा भीषण बाढी, २ जनाको मृत्यु १४ जना बेपत्ता